Semalt Expert dia mamelabelatra ny fomba hiadiana amin'ny hala-bato amin'ny Google Analytics
Indraindray misy fitaterana an-tserasera azo alefa any amin'ny Google Analytics. Ny fifamoivoizana an-tsokosoko dia manondro ny fifamoivoizana izay tsy takiana amin'ny antontan'isa momba ny tatitra. Ity fotsiny ity satria tsy fifamoivoizana marina ny fifamoivoizana an-tsokosoko ary mahatonga ireo antontan-kevitra diso izay mametaka antontan'isa. Ny fanalahidy hamaranana ity fandrahonana ity dia ny fametrahana fidirana an-tànana.
Milaza i Lisa Mitchell, mpitantana ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt Digital Services, ny fomba hisorohana ny fitohanana fifamoivoizana sy ny fiarovana.
Misy antony telo manan-danja izay mitondra fitohanana fifamoivoizana:
Azo alefa any amin'ny kaonty Google Analytics ihany ny data amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana an-tserasera.
Io fehezan-dalàna io ihany dia azo ampiasaina tsy amin'antony amin'ny tranonkala iray hafa izay tompon'ilay mpampiasa iray ihany.
Mety horoahina ny ID ka ampiasaina handefa rakitra diso avy amin'ny tranonkala tsy misy ifandraisany.
Azo atao ny mivezivezy amin'ny fitaterana ny angon-drakitra amin'ny alalan'ny fampiasana sivana iray tsy misy na sivana. Na izany aza, ilaina ny manangana sivana iray ary mampiasa azy io hanakana ny fifamoivoizana. Tena ilaina izany satria ahafahana manangona rakitra ny tahirin-drakitra afa-drakitra izay azo alaina avy amin'ny anarana nomena azy. Ny anaran'ny mpampiantrano dia manondro ny sehatra misy ny tranonkala mahaliana. Ireto manaraka ireto ny fepetra takiana mialoha ny fametrahana ny anaran'ny mpampiantrano:
Fanamafisana avy amin'ireo mpandraharaha momba ny tranonkala
Tokony hijery fanandramana tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny voka-dratsin'ny sivana alohan'ny handefasana azy any amin'ny fomba fijery lehibe indrindra.
Tokony hanana fahalalana momba ny fomba hanoratana ny teny tsy tapaka.
Azonao fantarina raha toa ka misy loharanom-baovao tsy fantatra momba ny kaonty Google Analytics amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny tatitry ny mpampiantrano. Ny tatitra momba ny fampiantranoana dia azo atao amin'ny fanamarinana ny kaonty Google Analytics ao amin'ny fizarana Audience. Mifidiana ny safidy teknolojika arahin'ny tambajotra. Ity manaraka ity amin'ny fisafidianana ny habeny voalohany amin'ny anaran'ny mpampiantrano.
Azo atao ny mahazo fidirana amin'ireo mpanjifa fampandrosoana raha tsy nampiharina ny anaran'ny mpampiantrano. Fikirakirana amin'ny https://translate.googleusercontent.com/ sy http: // webcache..googleusercontent.com/ dia azo raisina ary tokony ho raisina indrindra satria:
1. Asehon'izy ireo rehefa nampiasaina tamin'ny tranonkala iray ny tranonkalan'i Google
2. Asehon'izy ireo fa ny safidy "atao" dia nofantenana tamin'ny valin'ny fikarohana.
Ahoana no hamoronana endriky ny famoahana matetika
Ny mpamorona fanontana dia tokony hampiasaina amin'ny famoronana ny fomba fiteny.
Tokony hampiasaina ny fifehezan-tsoratra amin'ny syntax.
Ny metacaracters dia tokony alaina amin'ny fametrahana ny lamosina (\_) na ny lozam-pifamoivoizana (/) eo anoloanà fijanonana feno.
Ohatra iray amin'ny fomba fiteny mahazatra dia freshegg. (Co \_ .uk | com) | googleusercontent. Ny sivana dia tokony hosedraina tanteraka satria ny angon-drakitra iray dia tsy navela hijery ny tatitra, dia tsy ho tafavoaka intsony izany.
Ahoana ny fametrahana ny sivana amin'ny fomba fijery
Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny sivana dia tsy mitondra any amin'ny fananana tsy ilaina: manaraka ity dingana manaraka ity: 8)
Mandehana any amin'ny sehatry ny sivana
Mianara ny safidy "mahazatra"
eo amin'ny karazan-drakitra,
Ao amin'ny sahan-dahatsoratra "sivana" dia misy ny anaran'ny mpampiantrano
Ao amin'ny "Fomba fisiehana" dia manolotra ny anaran'ny anaran'ny mpampiasa
Fanandramana ny anaran'ny mpampiantrano
Ireto manaraka ireto dia tokony hitranga alohan'ny hampiharana ny sivana amin'ny tatitra lehibe indrindra
1. Ny tatitra amin'ny fotoana rehetra dia tokony hojerena mba hamantarana ireo tranga niseho
2. Miandrasa mandritra ny 2-5 andro izay miankina amin'ny habetsahan'ny fifamoivoizana
3. Ampitahao ny angona azo avy amin'ny fijerena ny fijerena ny fijerena ny tatitra
Ny filtres dia tsy tokony hampiharina amin'ny fomba fijerin'ny tatitra momba ny Zoma noho izy ireo tsy hanamarina hatramin'ny alatsinainy Source .